DEG DEG+XOG: Madaxda ugu sareysa Puntland oo maanta kulan xasaasi ah ka leh arrimaha soo celinta gobalka Sool & Xogo ka soo baxaya? – Puntlandtimes
DEG DEG+XOG: Madaxda ugu sareysa Puntland oo maanta kulan xasaasi ah ka leh arrimaha soo celinta gobalka Sool & Xogo ka soo baxaya?
July 11, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxda ugu sareysa dawladda Puntland, gaar ahaana Madaxweynaha & kuxigeenkiisa ayaa is arag gaar ah ka yeelanaya xaaladda gobalka Sool, gaar ahaana duulaankii ay soo qaaday Somaliland bilowgii sannadkan iyo jawaabta rasmiga ah ee Puntland oo aan ilaa hadda cadeynin, marka laga yimaado ciidamada Milateri ee la geeyey iyo qabanqaabo dagaal.
Xog laga helay kulankan ayaa sheegaysa in Madaxda ugu sareysa Puntland ay horey ugu kala aragti duwaanadeen arrimaha dagaalkan, waxaana horey Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cumar Camey usoo jeediyey in la dadajiyo howlgalka dib u xoreynta.
Laakiin Madaxweyne Gaas oo lasocda abaabulka iyo talada Saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa aqbalay soo jeedintooda oo ahayd in faraha looga qaado shaqadooda, kaliyana lagu taageero waxyaabaha ay doonayaan.
Kulankan gaarka ah oo lafilayo in ay yeeshaan Madaxweynaha Puntland & Kuxigeenkiisa waxaa ku wehlin doona xubno kooban oo katirsan saraakiisha ciidamada iyo shaqsiyaad muhiim ah, sidda ay ogaatay Puntlandtimes.com waxaana adag in la helo xogaha oo dhameystiran.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa u arka in soo celinta Laascaanood ay fursad hadda u tahay qorshaha Xukuumadda uu ka tirsan yahay, maadaama maqnaanshaheedu uu yahay boog isaga gaar ugu sii taala, bacdamaa uu ka soo jeedo.
Puntland waxay ku jirtay 7dii bilood ee lasoo dhaafay diyaar garow dagaal, kaas oo la gaarsiiyey heerkii ugu sareeyey, waxaana beelaha Puntland ay ku deeqeen hub iyo ciidamo, marka laga yimaado xoolaha & Lacagaha ay ku taageereen dawladda, maadaama waqti dagaal la galay Xukuumaduna taageero codsatay si loo difaaco dalka.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhawaan ka hor sheegay baarlamaankiisa in dagaal rasmi ah lagu soo qaaday mandiqada, wuxuuna sheegay in uu yahay dagaal aan marnaba laga waaban doonin, isagoo cadeeyey in Laascaanood qori caaradiis lagu soo celin doono.
A.c.. shirka GAAS baa kala hadlaya qolyahaan uu la shirayo inaanay qaadin wax dagaal ah intuu ku maqan yahay Begium.
Dadkana waxaa loo tusinayaa sikale waa MARIN HABAABIN UU qayb ka yahay Webpage-kan.
DAAWO:Xiisadii ka taagnayd gobolka Sanaag oo war culus kasoo kordhay & Somaliland oo dusha loo saaray wax walba oo…..
XASAASI:Caarre & Ciidamadiisa oo laga mamnuucay deegaano badan Iyo Xukuumadda madaxweyne Denni oo ku fashilantay xiisada ka taagan…..
WAR DEG DEG AH: Xiisadii gobolka Sanaag oo qaab qabiil isku badashay & Ciidamadii Somaliland ee qabsaday Yubbe oo xaalad culus ay soo wajahday “Beelo ku biiraya dagaalka hadii aysan……
Barnaamij shaqo abuur loogu samaynayo dhallinyarada Jaamacadaha ka qalin jebisey oo Garoowe ka furmay
DAAWO:Madaxda ugu saraysa Somaliland oo ku dhawaaqay arin aanan farxad galin Shacabka & Dowladda Farmaajo